काठमाण्डौमा राईनास हेल्प डेक्स-समस्या परे तत्काल उद्धार तथा राहत - Sanchar Post
काठमाण्डौमा राईनास हेल्प डेक्स-समस्या परे तत्काल उद्धार तथा राहत
काठमाण्डौँ, लम्जुङ स्थित राईनास नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न लागु गरिएको लकडाउनका कारण प्रभावमा परेका राईनास घर भइ हाल काठमाण्डौ उपत्यकामा बस्ने विद्यार्थी, मजदुर तथा विपन्न वर्गका लागि कोरोना राहत हेल्प डेक्सको स्थापना गरेको छ । हेल्प डेक्सले कोरोना संक्रमणको आशंका लागे उपचारमा सहजिकरणदेखि खान, बस्न वा अन्य कुनै अप्ठेरोमा परे राहत वितरण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
राईनास नगरपालिकाको संयोजनमा राईनासका वडा अनुसार वर्गिकरण गरि फोकल पर्सन वा सम्पर्न गर्ने व्यक्ति तोकिएको छ । राईनास घर भई राजधानीमा बस्दै आएका नागरिकले आफ्ना फोक पर्सनलाई सम्पर्क गरे तत्काल उद्धार तथा रहत प्रदान गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । समस्यामा परेका राईनसका नागरिकले निम्न मोबाइल नंबरमा सम्पर्क गरे आवश्यक सहयोग गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कोरोना हेल्प डेस्क” राइनास काठ्माण्डौका सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरु:
वार्ड न १ प्रकाश न्यौपाने – 9841381180
वार्ड न २ दिनेश चन्द्र पन्थी -9851070912
वार्ड न ३ र ४ पदम राज पन्थी – 9804124377
वार्ड न ५ कमल खड्का -9851072008
वार्ड न ६ सुबाश शर्मा -9851059266
वार्ड न ७ बिक्रम तमाङ्. -9851067413
वार्ड न ८ मोहम्मद सबिर मिया. -9855082042
वार्ड न ९ शम्शेर पराजुली -9851162503
वार्ड न १० महेश न्यौपाने -9851208578
लकडाउनका समयमा पर्न सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न हेल्प डेक्स बनाइएको सुबास कडरियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हेल्प डेक्स कोरोना भाईरसको बारेमा जानकारी दिने र विरामीको पहिचान गरी उपचारमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । नगरपालिकाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै काठमाण्डौमा अलपत्र परेका जो कोहिले सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाणडौमा हेल्थ डेक्सको स्थापनासँगै कोरोनाको त्रासमा रहेका लम्याजुङका नागरिकलाई राहत मिलेको छ। रोगसँगै भोकको संकटमा नपरुन् भन्ने उदेश्यले नगरपालिकाको संयोजनमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको कडरियाले बताउनुभयो । यसअघि कडरियाकै अग्रसरतामा लम्जुङका नागरिकलाई राहत वितरण गरिएको थियो ।
यसैबीच लम्जुङ्का स्थानीय तहहरुले कोरोना भाईरस विरुद्ध सञ्चार माध्यममा सुचना प्रसारण गर्ने पर्चा पम्पलेट, ब्रोसर, जस्ता प्रचार सामाग्री वितरण गरीरहेको छ । कोरोना भाईरसबाट जोगिन बारम्बार साबुने पानीले हात धुने,भिडभाडमा नजाने,मास्क लगाएर हिड्ने,माछा,मासु तथा अण्डाहरु राम्रोसँग पकाएर खाने,रुघाखोकी सहितको ज्वरो आएमा तातो तातो झोलिलो कुरा खानको लागि स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिएका छन् ।
‘योगको साधनाले अलौकिक शक्ति प्राप्त हुन्छ’
महत्त्व नपाएका दुई स्थानीय निर्वाचन